Mayelana NATHI - Shinva Medical Instrument Co., Ltd.
IShinva Medical Instrument Co., Ltd.
IShinva Medical Instrument Co., Ltd. yasungulwa ngonyaka we-1943 futhi yabhaliswa eShanghai Stock Exchange (600587) ngoSepthemba 2002.
Iqembu elihola phambili embonini yezempilo yasekhaya elihlanganisa ucwaningo lwesayensi, ukukhiqiza, ukuthengisa, izinsizakalo zezokwelapha kanye nokuhwebelana kwempahla yezinsiza kusebenza zezokwelapha nezemithi.
Emkhakheni wemishini yezokwelapha, kuye kwakhiwa imigqa eyisishiyagalolunye yomkhiqizo onobungcweti obuhle kakhulu nobuchwepheshe obuphelele, obemboza ukulawula ukutheleleka, i-radiotherapy kanye ne-imaging, izinsimbi zokuhlinza namathambo, ubunjiniyela bekamelo lokusebenza nemishini, imishini yamazinyo nezinto ezisetshenziswayo, ama-reagents wokuxilonga e-vitro kanye izinsimbi, izinto zebhayoloji nezinto ezisetshenziswayo, imishini ye-dialysis nezinto ezisetshenziswayo, ukuvikelwa kwemvelo kwezokwelapha neminye imikhakha. Njengamanje, ukuhlukahluka kanye nokukhishwa kwemishini yokulawula ukutheleleka kuklelisa phezulu phezulu emhlabeni. I-R & D kanye nokukhiqizwa kwemishini ye-radiotherapy kukhulu ngesilinganiso, kuqedile ngokuhlukahluka, kuphezulu emasheya asekhaya futhi kuhola ezingeni lobuchwepheshe.
Emkhakheni wemishini yokwenziwa kwemithi, inezikhungo ezine ezinkulu zobuchwepheshe bezobunjiniyela: ama-bio-pharmaceuticals, ukumnika okukhethekile, amalungiselelo emithi yendabuko yamaShayina namalungiselelo aqinile. Ihlanganisa ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza kanye nokuthengiswa kwemishini yokwenza imithi. Ngaphezu kokukhiqizwa kwemishini ejwayelekile yokwenziwa kwemithi, ihlinzeka ngobuthathu "bezobuchwepheshe bemithi, okokusebenza kwemithi nobunjiniyela bemithi" ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme. Ngasikhathi sinye, ihlinzeka ngayo yonke insiza yephakeji yokwakhiwa kwamakhemikhali, imithi yezemvelo nezimboni zemithi yezitshalo, futhi ixazulula zonke izinkathazo zamakhasimende.
Emkhakheni wezinsizakalo zezokwelapha, iShinva iqhubeke ithuthukisa ukuncintisana komkhiqizo nedumela layo. Sithembele ekutshalweni okuchwepheshe, ekwakhiweni, ekusebenzeni, ekuthengweni kwempahla kanye nasezisekelweni zensiza, sizokwakha iqembu lesibhedlela lesimanje elinemiqondo esezingeni eliphakeme yezokwelapha, ezingeni eliphakeme locwaningo lwesayensi, uchungechunge lokuphathwa komkhiqizo nokuhlanganiswa kwezinsiza.
Emkhakheni wezokwelapha nowezentengiselwano, uShinva uphendula ngenkuthalo kuphethini entsha yezimakethe nezinguquko, ugcina ukuncintisana okuqhubekayo kwenkampani nobungqabavu bokukhula okunempilo, futhi wenza nokuhlola imodeli yebhizinisi nokwenza izinto ezintsha.